October | 2016 | Indrenionline.com | Page 20
Monthly Archives: ७ कार्तिक २०७३, आईतवार ०३:३९
बर्दिया, ७ कात्तिक । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको संख्या बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा ४२ प्रतिशत पर्यटक बढेको निकुञ्जको भनाई छ । साउन महिनामा आन्तरिक पर्यटक दुई सय ३६ सार्क राष्ट्रका ९ र अन्य राष्ट्रका ६५ जना गरी ३ सय ९ जनाले निकुञ्जको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । यसैगरी, भदौ महिनामा आन्तरिक दुई सय ...
महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
काठमाडौं, ७ कात्तिक । एक चौथाई सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यसूची तय भएको छ । संसदले महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुअघि केही समय लिन सक्ने भए पनि सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको तीस दिनभित्र सदनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकले ...
चीनबाट इन्धन ल्याउने ओली सरकारको निर्णयलाई कसले बिथोल्यो ?
काठमडौ ७ कात्तिक । चीनबाट इन्धन भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रगति शून्य छ ।चिनियाँ इन्धन आयातबारे छलफल र अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगम र तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र हालको आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटकपटक चीन भ्रमण गरे । नियमदेखि मन्त्रालयसम्मका अधिकारी महँगा होटेलको खर्च र आकर्षक भत्ता पनि बुझे । तर, इन्धन आयात गर्ने ...
यी हुन् लोकमानको गतल कार्यलाई साथ दिने मतियार
काठमडौ ७ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही गम्भीर र जायज भ्रष्टाचारका उजुरीलाई ‘शंकास्पद’ रूपमा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । विभिन्न आयोजनाका भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीहरू आयोगले तामेलीमा राखेको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ । मुद्दा चल्ने शंकास्पद फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्नेमा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठक रहेको ...
काठमाडौँ, ७ कात्तिक । डेङ्गुले तराईका जिल्लामा प्रकोपको रूप लिन थालेको छ । एडिज जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गुबाट चितवन, पर्सा, कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, सप्तरी, रुपन्देही, सुनसरी, नवलपरासीलगायत निक्कै प्रभावित भएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार देशभर सउन यता ३०४ जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ । त्यसमध्ये चितवनमा सबैभन्दा बढी २७२ जनामा डेङ्गु पाइएको छ । महाशाखा ...
चीनले कलंकीको स्वरुप फेरिदिने
काठमाडौं, ७ कात्तिक । राजधानी भित्रिने र बाहिरिने मुख्य प्रवेशद्वार कलंकीले चाँडै आफ्नो स्वरूप फेर्ने भएको छ । विनाअवरोध काम अघि बढे कलंकी चोकले अबको डेढ वर्षभित्र रूप फेर्नेछ । विनाअवरोध सवारीसाधन आवागमन गर्न सक्नेछन् । यात्रुले घन्टौँ ट्राफिक जामको समस्या झेल्नुपर्ने छैन । यसका लागि सडक विभाग निर्माण कार्यमा जुटिसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । ...
काठमाडौैँ, ७ कात्तिक । अफ्रिकी मुलुकबाट भारत हुँदै भित्रिएका झारले नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वनस्पती, वन्यजन्तुको वासस्थान, आहारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न थालेपछि समग्र संरक्षण अभियानमा चुनौती थपिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको जङ्गलमा पाइने माइकेनिया र उत्तर अमेरिकी जङ्गलमा पाइने पार्थेनियम नाम गरेका झार भारतको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् । यी झार संरक्षित क्षेत्रमा फैलिन थालेपछि संसारकै लागि दुर्लभ ...
लिटिल मिस दाङकी प्रतिष्पर्धी बुढाथोकीद्वारा आफुलाई भोट गर्न आग्रह
घोराही , ७ कार्तिक। लिटिल मिस दाङ २०१६ कि प्रतिष्पर्धि श्रृखला बुढाथोकिले आफुलाई लिटिल मिस दाङको विजेता बनाउन सबैलाई अनुरोध गरेकि छीन । उत्सर्ग फील्मस नेपाल र रोयल ब्युटिसियनद्वारा घोराहीमा जारी लिटिल मिस दाङका लागि आयोजित प्रतियोगितामा घोराही रतनपुर निवासि बुढाथोकिले अनलाइन भोट गरी आफुलाई विजयि बनाउन आग्रह गरेकि हुन् । प्रतियोगितामा देखिएको लगाव, क्षमता तथा रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक क्रीयाकलापसंगै ...
अलमलमै संविधान संशोधन प्रक्रिया
काठमाडौँ, ७ कात्तिक । असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने तीनबुँदे वाचासहित सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ । असन्तुष्ट दलसँग सत्तारुढ दलले गरेको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन । तर, सीमाङ्कन, नागरिकता र भाषाका विषयमा प्रमुख दलबीच केही अनौपचारिक परामर्श भने भएको छ । परामर्श परिणाममुखी भने बन्न सकेको छैन । ...
म पनि महाअभियोगकै पक्षमा छु : देउवा
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि महाअभियोगकै पक्षमा देखिएकाछन । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शनिबार भेटगरी देउवाले महाअभियोग पारित गराउने पक्षमा आफू रहे पनि पार्टी भित्रको विवादले निर्णय गर्न केही अफ्ठेरो परिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालसँग सभापति देउवाले पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने प्रयत्न जारी रहेको समेत जानकारी दिएको दाहालले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा बताएका थिए ।